စျေးဝယ်စာရင်း - SoftList | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » စျေးဝယ်စာရင်း - SoftList
စျေးဝယ်စာရင်း - SoftList APK ကို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန် catalog ကို အသုံးပြု. လျင်မြန်စွာသင်၏စျေးဝယ်စာရင်း Create နှင့်အော်တိုပြီးဆုံးအရင်းအမြစ်များ၏အကူအညီနှင့်အတူ။
သင်ရုံစျေးနှုန်းအတိုင်းအတာ၏ယူနစ်, အမျိုးအစား, လေ့လာရေးနှင့်ဓာတ်ပုံထည့်ခြင်းအားဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ပြည့်စုံစာရင်းများ၏အမည်များထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်စာရင်းဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
ထုတ်ကုန်များ၏စျေးနှုန်း Add နှင့် SoftList သင်တို့အဘို့စုစုပေါင်းဝယ်ယူတွက်ချက်ကြကုန်အံ့။
သင့်ရဲ့ဝယ်ယူမှု၏သမိုင်းချွေတာခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏ကုန်ကျစရိတ်တစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး, သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောစတိုးဆိုင်များတွင်တူညီသောထုတ်ကုန်ဝယ်ယူခဲ့ကြပါလျှင်, စျေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်လုပ်ဆောင်။
SoftList သင့်ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့အစီရင်ခံစာများနှင့်ဇယားရှိကြောင်းတစ်ခုတည်းသောစျေးဝယ်စာရင်း App ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်အမျိုးအစားကိုပိုကုန်ကျစရိတ်ခဲ့ထိုကဲ့သို့သောအရာအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောသတင်းအချက်အလက်, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ဝယ်ယူမှု၏သမိုင်းကိုကယ်တင်နှင့်အစီရင်ခံစာများကို generate ။
မိုဃ်းတိမ်ကိုန်ဆောင်မှုအားဖြင့်သင်တို့ကိုအခြားသူများနှင့်မျိုးစုံကိရိယာဝေစုစာရင်းများအကြားသင့်ရဲ့ဒေတာတွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်နဲ့ automatic Backup တွေကိုတဆင့်မိုဃ်းတိမ်၌ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏အားလုံးသင့်ရဲ့ဒေတာတွေကိုသိမ်းထားနိုင်တယ်။
သင်တစ်ဦး SoftList အကောင့်ကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်သည်မိုဃ်းတိမ်န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်စေရန်။ သင်ပင်သင့်ရဲ့စာရင်းကိုနောကျ, အခြိနျမဒီ account ကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
- သင့်စျေးဝယ်စာရင်း Register နှင့်စီမံခန့်ခွဲ။
- ပုံရိပ်တွေနှင့်အတူထုတ်ကုန်များ၏ Catalog ။
- အသံဖြင့်အမိန့်ပေးပါသို့မဟုတ်ဘားကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်ဖို့အားဖြင့် အသုံးပြု. ကိုယ်တိုင်ပစ္စည်းများ Register ။
- အီးမေးလ်, SMS သို့မဟုတ် WhatsApp ကိုအားဖြင့်သင့်စျေးဝယ်စာရင်းမျှဝေပါ။
- ထုတ်ကုန်မှစျေးနှုန်း Add နှင့်စုစုပေါင်းဝယ်ယူကြည့်ရှုပါ။
- သင့်ဝယ်ယူသမိုင်း Save ။
- မျိုးစုံ devices များအကြားသင့်ရဲ့ဒေတာကိုထပ်တူကျအောင်။
SoftList ယခု Android Wear စမတ်နာရီပေါ် avaliable ဖြစ်ပါတယ်။
6.05 ကို MB